aqondise | Belajar | Trading Forex Online
ganifx/ EyeNkanga 7, 2017/ ukuhlanganisa/ 0 izimvo
Ukususela ezinye nokubuyekezwa zangaphambili, njengesiseko uhlalutyo intermarket kwimarike forex i kuqukunjelwe: Ukuba yokusithwa Dow, i Nikkei index waguqa. Ukongezelela ukuhlanganisa yalo entle phakathi kwiimarike stock ehlabathini, kuba uqoqosho US zinxulumene kakhulu Japan. Ukuba index Nikkei wawa, i USD / JPY kwakhona buthathaka okanye wamqinisa JPY, and vice versa, ukuba Nikkei phezulu USD lwemali…
Ubudlelwane phakathi igolide kunye US dollar ngokwayo udla ukuba unxulumano elibi. Ngokwemveli xa uqoqosho lwehlabathi lukhula, Abatyali ekuthengeni US dollar athengise igolide, and vice versa. US dollar kunye Japanese Yen naye ngoku, kuye ingqalelo yelizwe ekhuselekileyo-indawo kwaye enye sisixhobo mali pretty ekhuselekileyo. oli ekrwada, okanye ukubizwa ngokuba 'igolide black'…
ganifx/ EyeDwarha 30, 2017/ ukuhlanganisa/ 0 izimvo
Sesivuno bangaba kusetyenziswa inkomba imali eninzi. US bond hoxa ibonisa imeko kwiimarike zenkunzi US, ngaloo ndlela ibonisa imfuno US lwemali. kwenzala Bank zibonise ukunyuka. Ukuba amazinga enzala bavuke, izivuno bond ukwenyuka isehla amaxabiso bond. Ukwanda kwesantya senzala ibhange ukuba izinga currency exchange kwaqinisa. Ngoko nokunyuka izivuno bond (okanye…
Kungoku nje bond yenye inxalenye engundoqo kwenkqubo iimarike zehlabathi, yaye usoloko a barhwebi ukukhathazeka forex. A iqhina bubungqina bokuba bezimali baye bavuma ukunikezela ngemali mboleko kwezobuRhulumente belizwe a (ngokuba kwiibhondi zikarhulumente okanye kwiibhondi zikarhulumente) okanye iqumrhu elisemthethweni (basondelelane inkampani okanye iziko), phambi kwexesha kunye nezinga…
Njengokuba iye kancinane ekhankanywe iingxoxo ezidlulileyo , ukuba isalathisi kwemfuyo abe nolwalamano olusondeleyo kakhulu kunye lwemali, ingakumbi amazwe ukuba babe isalathisi engundoqo kunye lwemali rhoqo wasebenza. Umgaqo basic ngohlahlelo intermarket kwiimalike zemali ehlabathini, akukho 3 isixhobo bentsebenziswano ukuphembelela omnye komnye, okt index ixabiso stock, harga dan isivuno bond (bonds okanye bond karhulumente…
NESTOKHWE ISALATHISO IN THE WORLD
Kwilizwe ngalinye ummandla othile idla index kwemfuyo ebalulekileyo reference okanye izikhokelo nabatyali zombini kuzo phaya kuhlalutyo icebo lomqhubi. Ezinye ebalulekileyo Isalathisi imfuyo yehlabathi ozakuthathwa inkomba eyinhloko: 1. I Dow Jones Industrial avareji (DJIA, okanye Dow Jones) – United States Dow Jones index luphawu oluphambili emele 30 inkampani…
UHLAHLELO UKUQONDA Intermarket
Kwihlabathi borhwebo eninzi izixhobo wasebenza , njengoko forex, index , stock . isixhobo ngalinye elidityaniswe omnye komnye. Ezi buhlobo zidla ngokuba intermarket. Intermarket ubudlelwane obunentsingiselo kunye nonxibelelwano phakathi kweentlobo ezahlukeneyo iimarike kunye isixhobo sorhwebo ngasinye. Ixabiso Intshukumo kweentlobo ezahlukeneyo kwiimarike kuchaphazela nabanye, umzekelo phakathi istock market kunye nemarike yorhwebo,…